Qaabka Gabdhaha Somalida Loogu Raaxeeyo wasmada fooraarsiga | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Qaabka Gabdhaha Somalida Loogu Raaxeeyo wasmada fooraarsiga
Qaabka Gabdhaha Somalida Loogu Raaxeeyo wasmada fooraarsiga
Bulsha:- Gabdhaha Soomalida ayaa Jecel qaabab badan oo gaar ah in iyaga loogu raaxeeyo oo ka duwan naagaha kale ewe aduunka.Sida aan wada ognahay gabdhaha soomalida waa ka sharaf badan yihiin naagaha kale ee caalamka waxayna u baahanyihiuin in si gaar ah oo isbishaal ah loola dhaqmo.
Marka hore gabdhaha soomalida waxay jecelyihiin in si taxadar leh loo amaano oo aan lagala xishoon amaanta iyo qurxdeeeda iyo wanaageeda iyadoo aan laga bad badinineynin.
Marka xigta af macaan kula hadal una sheeg in ay tahay boqorada qalbigaaga dagtay ayna ka sharaf badan naagaha kale.Waxaad u sheegtaa in aad ku faanto iyada maadaam ay tahay gabar soomalaiyeed.
Waxaa kaloo sameeysaa si asluub ah indhaha ooga fiir oo wajigana ka shumi ama madaxa hortiisa (Forehead).Shumiska halkaaa ah wuxuu galiyaa kalsooni saaid ah iyo in la jecelyahay iyadoo qalbigeeda kuu fasaxeyso .
Marka xigta caadi u bilow raaxadii kale adigoo ka bilaabaya shumiska afka dhuuqmadiisa ilaa dhagaha ,luqanta qacanta ku haya dhabarkeeda ilaa dhexdeeda kalyahay korkooda.
Howsha kale sii dhameyso adigoon deg degeynin ilaa qofta ka bislaaneyso ,markaas kadib ciyaartii culseyd bilow ee gogoasha aheyd.